DAAWO SAWIRRO: Dawladda Puntland oo bilowday Tiro-koobka Shaqaalaha dawladda ee kusugan gobalka Karkaar – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
DAAWO:Madax ka tirsan Somaliland oo si adag uga hadlay khilaafka u dhaxeeya Somalia & Kenya 2 hours ago
Somalia oo guul xoogan ka gaartay khilaafkii Kenya & Madaxweyne Farmaajo oo cagta saaray wado midaysay shacabka Soomaaliyeed 4 hours ago
DAAWO:Ganacsatada Qaadka ee Somalia oo ku dhawaaqay arin dhul gariir ku riday Kenya “Hada ayaan joojinaynaa Qaadkiinii” 4 hours ago
Madaxweyne caan ah oo xil uusan u qalmin wiil uu dhalay u magacaabay 4 hours ago
Wasiir ka tirsan dowladda Somalia oo codsi u diray madaxda Koonfur Afrika 4 hours ago
Home 2017 May W.Gudaha, Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Dawladda Puntland oo bilowday Tiro-koobka Shaqaalaha dawladda ee kusugan gobalka Karkaar
May 17, 2017 |by W LAASCAANO| 0
QARDHO(P-TIMES) – Guddiga Tiro-koobka Shaqaalaha dawladda Puntland ayaa gaaray magaalada Qardho ee gobalka Karkaar, waxayna halkaas ka bilaabeen tiro-koobka Shaqaalaha dawladda oo ay horey uga sameeyeen gobalada Barri & Gardafuu.
Shaqaalaha dawladda ee kusugan gobalkaas oo dhan ayaa la marinayaa Hanaanka dibu eegista iyo tiro-koobka Shaqaalaha dawladda, iyadoo ay madasha soo xaadireen shaqaaluhu.
Gudoomiyaha gobalka Karkaar Cabdillaahi Siciid Caarshe (Dhaqaaje) oo furitaankii manta ka hadlayey ayaa bogaadiyey talaabada dawladdu ay u qaaday arrintan, isagoo sheegay in ay tahay mid muhiimad weyn ugu fadhida shaqaalaha.
Mr, Dhaqaaje ayaa sheegay in qorshahan ay tahay markii koowaad oo laga hirgaliyey Puntland, ayna waajib ku tahay shaqaale kasta in ay Isdiwaangaliyaan si loo ogaado tiradda, tayadda iyo baahida Shaqaalaha dawladda Puntland ay qabaan.
Mashruuca Tiro-koobka iyo dibu habeynta Shaqaalaha dawladda Puntland ayaa horrey looga soo sameeyey gobalada Barri & Gardafuu, waxaana sidda qorshuhu yahay la tagi doonaa dhamaan gobaladda Puntland ee harray.